China Okirikiri Okporo ụzọ Na Oghere China Manufacturers & Suppliers & Factory
Okirikiri Okporo ụzọ Na Oghere - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Okirikiri Okporo ụzọ Na Oghere)
240W Led Street Light Fitting For Square Poles
Bbier Led Street Light Bulbs jiri akwa agba agba agba 3030 SMD. Led Street Light Fitting dị ọtụtụ ugboro karịa ìhè ọdịnala na Led Street Light With Pole nwere ike dochie 800 watt HPS / HID ìhè fixtures.Our 240W ada ìhè okporo ámá dị mma na-enye 31200 Lumens @ 5700K Ìhè White, Nke ahụ bụ egwu ọkụ arụmọrụ nke 130lm / w!...
Ala na-adabere na mbara igwe dị larịị ọkụ 60W
Eji Mbara Igwe Na- acha Igwe Mmiri jiri SMD LED ibe. Nke a na- enwu oghere nke anyanwụ na- abịa n'ọtụtụ nhọrọ: 30w, 40w, 50w, 60w na 80w. All the Led Street Light with Pole solutions are vasatail, na ike ịghọ ma ala ma ọ bụ ogwe osisi, n'ihi na nke ọ bụla oru ngo. Usoro ndị a kwadoro site na afọ 5 zuru ezu...
Anyanwụ butere ìhè dị elu maka ụzọ ubi
Anwụ Solar na-ebute ìhè kachasị elu maka ubi Na mgbede, 25W Solar LED Pole Top Light ga-agbanye onwe ya wee nwuo ọkụ na-acha ọcha site na iko mmiri ozuzo na nchapụta 140 lumens na ụgwọ zuru oke nke anyanwụ. Nke a dugara Solar Post n'elu ìhè ga-atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya mgbe...
Okirikiri Okporo ụzọ Na Oghere Okirikiri okporo ụzọ na oghere 240W Ejiri okporo ụzọ na oghere Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Maka Ogige Okporo Ụzọ Mbara Igwe 40w Ogige Osimiri Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Uhie Owuwu Okporo Ụzọ